Mareykanka oo xayiraado ku soo rogaya Itoobiya | KEYDMEDIA ONLINE
Mareykanka oo xayiraado ku soo rogaya Itoobiya
Dowladda Mareykanka ayaa cunaqabateyn ku soo rogeysa dalka Itoobiya, iyo saraakiil ciidan oo danbiyo dagaal oo bani’aadannimo ka galay gobolka Tigray.
WASHINGTON, USA - Dalka Mareykanka ayaa xayiraado ku soo rogaya Dowladda Itoobiya, taas oo la xiriirta colaaddii cusleyd ee woqooyiga waddanka labaad ee ugu dadka badan Afrika ka curatay sanadkii hore, kadib xiisado muddo dheer soo jiitamayay oo u dhaxeeyay Dowladda Federaalka ee ee uu hoggaaminayo Ra’iisul Wasaaraha ku guuleystay Abaalmarinta Nabadda ee Abiy Ahmed, iyo mas’uuliyiinta gobolka Tigray.
Bayaan ka soo baxay xaafiiska Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mareykanka Antony Blinken, ayaa lagu sheegay in xayiraad lagu soo ragayo kaalmada dhaqaale iyo amni ee ay siiso Itoobiya, kadib markii lagu helay danbiyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha, oo ciidamada Dowladda Itoobiya ka geysteen dagaalkii gobolka Tigray.
Sidoo kale, Antony Blinken, ayaa xusay in xayiraado dhanka socdaalka ah la saari dooro saraakiil ka soo kala jeedda dalalka Itoobiya iyo Eritrea, kuwaas oo lagu eedeeyay inay tacaddiyo badan geysteen intii uu socday dagaalii TPLF.
Kumanaan rayid ah ayaa dhintey, malaayiin ayaa dalka dhexdiisa ku barakacay, halka ku dhawaaad 50,000 oo ruux magangalyo ka raadsadeen Suudaan, iyagoo baxsad ka ah duqeymaha xagga cirka ah, iyo is ka horimaadyada, kadib markii bishii November uu qarxay dagaalka Jabhadda Xoreynta Dadka Tigray iyo Dowladda Itoobiya.
Ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritrea, ayaa lagu eedeeyay in geysteen xasuuq ka dhan ah shacabka Tigreyga, isla markaana kufsi kula kaceen haween, Antony Blinken, ayaana Dowladda Fadaraalka ugu yeeray in la xisaabtanto dadka dhibka geystay.
Midowga Yurub ayaa hore u joojiyay kaalmadii dhaqaaale ee la siin jiray Dowladda Ethiopia, kadib markii ay bannaanka yimaadeen, danbiyo ka dhan ah bani’aadan-nimada, oo ay galeen saraakiisha iyo ciidamada Itoobiya.